Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News]
Myanmar IT Resource Forum » ADVERTISEMENT ZONE » » Training Center » Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News]
1 Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News] on 7th August 2010, 3:42 pm
Shine Lynn Htun
တညျနရော : Yangon , Myanmar
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-08-07
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 11
Myanmar IT Development Education Center
Address - No.S-22, Padonma Stadium, Sanchaung Street,Sanchaung Township, Yangon , Myanmar.
Contact Tel - (951) 500382 , (95) 95-415894 ၊ Contact Email - [You must be registered and logged in to see this link.]
မြန်မာအိုင်တီလောကဖွံ့ဖြိုးမှုဝဘ်ဆိုဒ်မှာနေ၍ တစ်ဖက်တစ်လှမ်းမှ မြန်မာနိုင်ငံအိုင်တီလောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အိုင်တီနည်းပညာသင်တန်းများကို Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ်
- လူငယ်များ အမှန်တကယ် တတ်ကျွမ်းနားလည်စေရန်
- လူငယ်များ ထိုက်တန်သော လစာဖြင့် အလုပ်အကိုင်ရရှိစေရန်
- မိမိတတ်ကျွမ်းထားသော ပညာရပ်ဖြင့် ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်
- မိမိတတ်ကျွမ်းထားသော ပညာရပ်များကို ပြန်လည်မျှဝေသင်ကြားပေးနိုင်ရန် နှင့်
မြန်မာနိုင်ငံအိုင်တီလောကဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် တတ်ကျွမ်းထားသော ပညာရပ်ဖြင့် တစ်ဖက်တစ်လှမ်းမှ အထောက်အကူရရှိစေနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပုံအား Download ဆွဲကြည့်ရန်
- Computer Basic Course
- Advance DTP Course
- Internet & Email Course
- A+ & Network Foundation Course
- Network & Server Introduction
- Programming Foundation Course
- C#.Net Development Course
- ASP.Net 2.0 Development Course များ
Sever 2003 Specialize Configuration နှင့် Linux Specialize Configuration များသာမက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည့် Internet Staff (အင်တာနက်ကျွမ်းကျင် ၀န်ထမ်းသင်တန်း) များကိုမိမိစိတ်ကြိုက်တက်ရောက် သင်ကြားနိုင်ပါသည်။
Internet Staff (အင်တာနက်ကျွမ်းကျင် ၀န်ထမ်းသင်တန်း)
Internet Technical Staff Course ဖြစ်ပြီး အင်တာနက်ဆိုင်တွင် ကျွမ်းကျင်သောဝန်ထမ်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် သင်ကြားပေးသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ပထမဦးဆုံး သင်တန်းဖြစ်သည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးပါက အင်တာနက်ဆိုင်များတွင် ကျွမ်းကျင်သောဝန်ထမ်းအဖြစ် ထိုက်တန်သောလစာဖြစ် အလုပ်အကိုင်ရရှိစေရန် ကူညီပေးမည်ဖြစ်ပြီး အင်တာနက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့်လည်းလုပ်ငန်းပိုင်းတွင် လိုအပ်ချက်များကို သိရှိစေရန်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ပုံအား Download လုပ်ကြည့်ရန်
၀ဘ်ဆိုဒ်မှ မန်ဘာများအတွက် သင်တန်းကြေးအထူး စီစဉ်ထားပါသည်။
မြန်မာအိုင်တီလောကဖွံ့ဖြိုးမှု့ မှဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းများအားလုံးအတွက် တက်ရောက်သူများသည် အချိန်ပြည့်ပြီးဆုံးအောင်တက်ရောက်ပီး သင်တန်းစစ်ဆေးသော စာမေးပွဲကို မပျက်မကွက် ဖြေဆိုအောင်မြင်သူ များကိုသာလျှင် သင်တန်းအောင်လတ်မှတ်ကို ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
Visit Myanmar IT Development at:
Last edited by Shine Lynn Htun on 7th August 2010, 5:23 pm; edited3times in total
2 Re: Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News] on 7th August 2010, 4:56 pm
-သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍတွင်သာ တင်ပါရန်။
-Link များကို Code ခံပါရန်
အခြား Forum တစ်ခု၏ Admin ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ၊ ဤ Forum ပေါ်တွင် နေသောအခါတွင်လည်း ကျွန်တော်တို့ Forum ရဲ့ စည်းကမ်းလေးတွေကို လိုက်နာပေးဖို့ ပြောလိုပါတယ်.
Last edited by SYKO on 7th August 2010, 5:10 pm; edited3times in total
3 Re: Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News] on 7th August 2010, 5:07 pm
4 Re: Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News] on 7th August 2010, 5:20 pm
$ƴǩǾ wrote: လက်ယားလိုက်တာနော်.... ဟင်းဟင်း
ဝေဖန်ပေးပါဗျ ဒါမှလဲ နောက်ပို့တွေကောင်းသွားမှာပေါ့ ဒီဖိုရမ်နဲ့ မရင်းနှီးသေးတာလဲပါပါတယ်
လေ့တော့လေ့လာနေပါတယ် ဘာတွေထူးလဲဆိုတာပေါ့ Welcome ပါ။
5 Re: Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News] on 7th August 2010, 5:25 pm
ဟင့်အင်း.. ဝေဖန်လို့မဖြစ်ဘူး။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိတယ်။
ဒီဖိုရမ်ဘာတွေထူးလဲဆိုတော့ ၊ လောလောဆယ်တော့ မထူးဘူးလို့ဘဲ ပြောရမှာဘဲ။
သူလိုကိုယ်လို ခပ်ပေါပေါ မြန်မာ Forum တွေထဲက ခွဲမထွက်လာနိုင်သေးဘူး...
6 Re: Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News] on 7th August 2010, 5:34 pm
$ƴǩǾ wrote: ဟင့်အင်း.. ဝေဖန်လို့မဖြစ်ဘူး။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိတယ်။
ထူးပါတယ် ဟိုစ်စတင်နဲ့ Run ထားတဲ့တွက် လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်
ဆိုဒ်တော်တော်များများထက် ဒီဖိုရမ်လေးကို ပိုသဘောကျတယ်
ခုမှရောက်လာတယ်ဆိုပေမယ့် တော်တော်များများကိုတော့ လျှောက်ကြည့်နေပါတယ်
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ဒီဖိုရမ်နဲ့ပတ်သတ်ပီး လမ်းညွှန်ပေးပါ လေ့လာနေပါတယ်
Forum တွေထဲကခွဲမထွက်နိုင်ဘူးဆိုတာ ဒီမှာက ကော်ပီတော်တော်များတယ်
7 Re: Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News] on 7th August 2010, 5:56 pm
We are just like Ning, we are not hosted on our own but sometime I try to break some limitations of this service.
COPY/PASTE ကြောင့်မဟုတ်ဘူး... သာမာန်ခပ်ပေါပေါ Forum တွေဆိုတာလည်း COPY/PASTE လုပ်နေတဲ့ Forum တွေကို ခေါ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး... ထားပါ
ခွဲထွက်နိုင်ဘူးဆိုတာကလည်း ၊ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့ အခြေအနေရောက်ဖို့ အများကြီးလိုသေးတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ...
ကျွန်တော့်မှာ ရှိတဲ့ Member တွေက ၊ Computer သုံးနေတဲ့ ရိုးရိုးသာမာန် User တွေ အတော်များပါတယ်။
အဲဒီ့အတွက် သူတို့မှာရှိတဲ့ အခက်အခဲသေးသေးလေးတွေကို Internet သုံးပြီး ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုရှာရမယ်ဆိုတာ မသိကြဘူး။ နောက်တစ်ခု English အရမ်းကြောက်တယ်။ Google က ရှာလိုက်လို့ ၊ English လိုတွေထွက်လာမယ်ဆိုရင် ကြောက်သွားတယ်။ အဲဒီ့တော့ တစ်ခုခုဖြစ်တာနဲ့ ဒီကိုလာကြတယ်။ မေးကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း အတတ်နိုင်ဆုံးဖြေကြတယ်။ အဖြေတွေရသွားကြတယ်။ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အကုန်လုံးကို အကူအညီပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်လိုချင်တာ အဲအဆင့်နဲ့တင်မဟုတ်ဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ Pro မကျတောင် ၊ Intermadiate မေးခွန်းတွေကို မေးရဲတဲ့သူ ၊ ပြန်လည်ဆွေးနွေးရဲတဲ့သူတွေ ပေါ်လာစေချင်တယ်။
ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာတွေလည်း အများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲကျတော့လည်း မစွမ်းနိုင်ပြန်ဘူး။ အပြင်မှာလည်း ကျွန်တော့်ဘ၀အတွက် ကြိုးစားနေရတုန်းဘဲ။
ဒီ Forum ကို ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ အဆင့်ထိရောက်ဖို့ဆို ၊ ကျွန်တော့်ဘက်က အရာရာကို ခဏလောက် မေ့ထားပြီး ၊ တစ်စိုက်မတ်မတ်နဲ့ အနည်းဆုံး ၄ လ လောက် ဒီထဲမှာ အားထည့်ရမယ်။ အဲဒီ့ ၄ လလောက် အားထည့်နိုင်ရင် ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ အဆင့်ရောက်လာမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ ၄ လ ဆိုတဲ့ အချိန် ကျွန်တော့်မှာ မရှိဘူး။ နောက်တစ်ခု ကျွန်တော့်မှာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် မရှိဘူး။ ကိစ္စတော်တော်များများကို လုပ်ဖို့ဆိုရင် ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲ။
အဲဒါလည်း မုန့်လုံးစက္ကူကပ် ပြောရမလားဘဲ ၊ ကျွန်တော် ၄ လလောက် အားစိုက်ရင် အဲဒီ့ လူအရင်းအမြစ်လည်း ရလာနိုင်တယ်။ သိတယ်။ ဒါပေမယ့် အားစိုက်ဖို့ကျတော့ လူပြန်လိုပြန်ရော.
COPY/PASTE ကတော့ Online သက် နု သေးတဲ့သူတွေ လုပ်တတ်ကြတာဘဲ... ကျွန်တော် ဒီ Forum စလုပ်တုန်းကဆို Online တစ်စိုက်မတ်မတ် သုံးဖူးတာမှ ၂ လ လောက်သက်တမ်းနဲ့ လုပ်လိုက်တာ။ အဲဒီ့တုန်းက ဘာရေးရမှန်းလည်းမသိတော့ နိုင်ငံခြားက ရေးထားတာလေးတွေ ၊ ကိုယ်လုပ်ကြည့်လို့ အဆင်ပြေရင် ကူးတင်ပေးလိုက်ကော။ အခုနောက်ပိုင်း အတွေ့အကြုံရင့်လာတော့မှ အဲကိစ္စမရှိတော့တာ။ ဒါလည်း ကြုံ၇င်ကြုံသလိုတော့ ref: လုပ်နေရဦးမှာဘဲ။
စာတောင် အတော်ရှည်သွားပြီ.... ဒါတောင် စာလုပ်ရဦးမှာမို့လို့ ချုံ့ရေးထားတာ။ ဒီ့ထက် ပြောပြချင်တာတွေလည်း အများကြီးရှိသေးတယ်။
8 Re: Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News] on 7th August 2010, 7:09 pm
$ƴǩǾ wrote: ကျွန်တော်လိုချင်တာ အဲအဆင့်နဲ့တင်မဟုတ်ဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ Pro မကျတောင် ၊ Intermadiate မေးခွန်းတွေကို မေးရဲတဲ့သူ ၊ ပြန်လည်ဆွေးနွေးရဲတဲ့သူတွေ ပေါ်လာစေချင်တယ်။
အကိုပြောတာလဲဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ပြန်ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာ မေးတဲ့လူတွေရှိမှဖြစ်တာလေ မေးတဲ့လူတွေရှိဖို့ဆိုတာလဲ သူတို့လိုအပ်မှမေးမှာပေါ့ တကယ်လို့မေးလာရင်တောင် ပြန်လည်ဆွေးနွေးရဲတဲ့လူတွေ ရှိပါတယ်။ ဆိုဒ်တော်တော်များများမှာတွေ့ဖူးပါတယ် Myanmar IT Pro , Myanmar IT Development နောက်တော့ ဒီဆိုဒ်မှာလဲရှိပါတယ် အကိုအားမရဖြစ်နေတာနဲ့တူပါတယ်
ကျွန်တော်တို့တွေ ဒီလိုဆိုဒ်တွေလုပ်နေတာ မျှဝေနေတာ နာမည်တစ်ခုရယုံကလွဲပြီး စေတနာသက်သက်နဲ့မျှဝေနေကြတာလေ ဒီ့တော့ ကိုယ့်ဘ၀တွက်လဲ ကိုယ်ကျောင်းရသေးတယ်မဟုတ်လား Forum တစ်ခုကောင်းဖို့ တစ်ယောက်အားနဲ့မရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ချေနဲတယ် အများအားနဲ စည်းစည်းလုံးလုံးဆိုရင် အချိန်တိုတွင်း အောင်မြင်လာနိုင်ပါတယ် ၄လလောက်အချိန်ပေးပြီး ကိုယ့်တွက်ကိုယ်တောင် မေ့ပြီးအိုင်တီလောကဖွံဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်မယ့် အကိုစိတ်ဓါတ်ကိုလေးစားပါတယ်ဗျာ ..... ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကရှေ့ကသွားပေမယ့် နောက်ကလိုက်တဲ့လူတွေကရှိဦးမှမလား အကိုပြောသလို အားစိုက်ဖို့ လူတွေ လိုတာကတော့ အမှန်ပါပဲ ရှေ့ကနေဦးဆောင်မယ်ဆိုတာတောင် နောက်ကသတ္တိရှိရှိ လိုက်ရဲတဲ့လူတွေ ရှားတယ်ဗျာ..... Copy/Paste လုပ်တာကတော့ အပြစ်ပြောလို့မရပါဘူး Copy right မှ မတွင်ကျယ်သေးတာ ပိုစ့်တစ်ခုတင်လိုက်တဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ စီးပွားရေးအရ မလုပ်ထားဘူးဆိုရင် သူတင်လိုက်တဲ့ပိုစ့်ဟာ အားလုံးတွက်လို့ခံယူထားတဲ့အတွက် တခြားလူ Copy ကူးတာကို အပြစ်ပြောစရာမလိုပဲ မျှဝေပေးနေတာပါလား ဆိုတဲ့အသိနဲ့ ကျေးဇူးတောင်တင်ရမှာပါ ဒါပေမယ့်သူ့ကိုလေးစားမှုပြုပြီး အကိုပြောသလိုပေါ့ ref: လေးထည့်ပေးတော့ တကယ်ရေးခဲ့တဲ့လူအတွက် ကိုယ့်ပိုစ့်ကိုယ်ဖတ်ပြီး ဂုဏ်ယူရတာပေါ့
ဒါပေမယ့် တကယ်ရေးသားသူရဲ့ ref: ကကြားထဲမှာ တင်ပျောက်ပျောက်သွားတာ ကိုကဆိုးနေတာအကိုရေ .............. သြော်ဒါနဲ့ ကြေငြာထပ်ဝင်လိုက်မယ် ကျွန်တော်တို့သင်တန်းကနေ မြန်မာအိုင်တီလောကတွက်
အကျိုးပြုမယ့် လူတွေ အများကြီး မွေးထုတ်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော် )
9 Re: Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News] on 7th August 2010, 7:26 pm
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် MMITDev ကို သိပ်မကြိုက်လှဘူး... ဘာလို့လဲတော့ မမေးနဲ့။ မိတ်ပျက်ကုန်မယ်။
MMITPro မှာလည်း လေးစားဖွယ်ရာလူတွေ အများကြီးပါ... ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေတော့ သဘောမတွေ့လှဘူး...
ပြောရရင်ဗျာ ကျွန်တော်လိုချင်တာ အဲလို Community မျိုးတွေလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ဟိဟိ
ကျွန်တော် အရမ်းကို လေးစားတဲ့ Community တစ်ခုရှိတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေပါ... Newbie တွေလည်းရှိတယ်။ Pro မှ တကယ့် Pro ကြီးတွေလည်းရှိတယ်။ နာမည်လည်း အရမ်းမကြီးဘူး။ သူ့ဟာနဲ့သူ သိုသိုသိပ်သိပ်လေးဘဲနေတယ်။ အခု Founder က စစ်မှုထမ်းဖို့ သွားတော့ co-founder ရွေးတဲ့အခါမှာ အတော်လေးစားသွားတာ...
အစ်ကိုတို့သင်တန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်တာတော့ ၊ တကယ် တတ်အောင် သင်ပေးလိုက်ကြပါလို့ဘဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အထင် T-Link WebDev ကလည်း နည်းနည်းနွယ်နေမယ်ထင်တယ်။
အခုချိန်မှာ သင်တန်းဖွင့်တာက Startup တွေအတွက် အကောင်းဆုံး ၀င်ငွေအမြန်ရမယ့် နည်းလမ်းဘဲ... ဒါပေမယ့် ငွေနောက် မလိုက်ဖို့နဲ့ တကယ် skillful ဖြစ်တဲ့သူတွေက ၊ တကယ် မှန်ကန်တဲ့ ပညာရပ်တွေကို ၊ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ တကယ် တတ်အောင် သင်ပေးလိုက်ကြဖို့ဘဲ တိုက်တွန်းချင်တယ်ဗျာ...
နောက်တစ်ခုရှိတာက အစ်ကိုတို့ရဲ့ Internet Staff သင်တန်းကြီးတော့ မကြိုက်ဘူးဗျာ. မှန်တာပြောရရင် အဲဒါတစ်ချက်ထဲနဲ့တင် ကျွန်တော် အတော်လေးကို အထင်သေးသွားတာ.. (စိတ်မဆိုးနဲ့နော်)
ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမြင်သွားတာက အခြား သူလို ကိုယ်လို ပိုက်ဆံရှေ့ထားတဲ့ သင်တန်းလို့ဘဲ မြင်သွားပါတယ်။ (မဝေဖန်ပါဘူးဆိုမှ ပြောမိနေပြန်ပြီ။ စိတ်ဆိုးနဲ့။)
စာကြွင်း။ ။ ကျွန်တော် အစ်ကို့ထက် အများကြီးငယ်ပါတယ်။ ညီ လို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
10 Re: Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News] on 7th August 2010, 9:04 pm
$ƴǩǾ wrote: အမှန်အတိုင်းပြောရရင် MMITDev ကို သိပ်မကြိုက်လှဘူး... ဘာလို့လဲတော့ မမေးနဲ့။
MMITDev က လူတိုင်းကို ကြိုက်ပါ လို့ ပြောနေဒါမဟုတ်ဘူးလေ .. အကိုရ .....ကိုယ်တိုင်ရပ်တည်မှူ ဆိုတဲ့ လူငယ်တွေစုပေါင်းပြီး ရပ်တည်ထားတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်တစ်ခုဘဲ .....ထပ်ပြောရင် ... ဒီ forum က founder ကိုလဲ ကြောက်ရပါတယ်။
$ƴǩǾ wrote: MMITPro မှာလည်း လေးစားဖွယ်ရာလူတွေ အများကြီးပါ... ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေတော့ သဘောမတွေ့လှဘူး...
ကျွန်တော်လေးစားဒါကတော့ mmgeeks.org က လူတွေဗျ ..ဘာလိုလဲတော့မမေးနဲ့နော် ...
$ƴǩǾ wrote: ကျွန်တော် အရမ်းကို လေးစားတဲ့ Community တစ်ခုရှိတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေပါ... Newbie တွေလည်းရှိတယ်။ Pro မှ တကယ့် Pro ကြီးတွေလည်းရှိတယ်။ နာမည်လည်း အရမ်းမကြီးဘူး။ သူ့ဟာနဲ့သူ သိုသိုသိပ်သိပ်လေးဘဲနေတယ်။ အခု Founder က စစ်မှုထမ်းဖို့ သွားတော့ co-founder ရွေးတဲ့အခါမှာ အတော်လေးစားသွားတာ...
ကောင်းပါတယ်ဗျာ ... အတုယူနိုင်မဲ့ ပုံစံရှာတွေ့တဲ့အတွက် ရအောင်အတုယူနိင်ပါစေလို့ ......ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ ... ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့် အားနဲချက်ကို .... ကိုယ့်ဟာကို ရှာပြီး ပြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ သူများတွေလို တခြားလူကိုကြည့်ပြီး အတုယူရမဲ့ အထိတော့ ..... မလုပ်နိုင်သေးဘူးဗျာ .. .ကိုယ်တိုင်ကကို ညံ့နေလိုလေ .......
$ƴǩǾ wrote: အစ်ကိုတို့သင်တန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်တာတော့ ၊ တကယ် တတ်အောင် သင်ပေးလိုက်ကြပါလို့ဘဲ ပြောချင်ပါတယ်။
စဉ်းစားထားပြီးသားပါ ... myanmaritresource အနေနဲ့ အခုလို လေနဲ့ အကြံပေးတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ .. mmitdev က အက်မင်တွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ပါ .. သူတိုဘယ်မှာနေတယ် .. ဘယ်လိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်အစ ....... အသေးစိတ်ကို ဖော်ပြထားလို့ ဘာပြဿနာဘဲ တတ်တတ်ရှောင်ပြေးလိုမရဘူးလေ .. သူများဝက်ဆိုက်တွေလို nickname တွေသုံးပြီး ရှောင်ပုန်းနေဒါမဟုတ်တော့ ခက်တော့အခက်သားဗျ ...
၀ဘ်ဆိုဒ်စတင်တည်ထောင်ကတည်းက .....Myanmar IT Development ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ယူလာမိတဲ့အတွက် .... အကျိုးမရှိတဲ့ အရာတွေ မလုပ်မိအောင် တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကြဉ် ခဲ့ကြတယ် ..သင်တန်းဖွင့်မယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားဒါကလဲ ... ပိုက်ဆံရပါစေဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် MMITDEv ဆိုတဲ့ နာမည်တောင်ယူပြီးသုံးမှာမဟုတ်ဘူး...........သင်တန်းတစ်ခုဖွင့်ရင် သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်အောင် ဖန်တီးရတဲ့ ငွေအင်အားဆိုတာ လိုအပ်တယ်
(ထည့်လိုက်ပီနော်တော်ကြာ အမှတ်ပေးခံနေရဦးမယ်) ဒီဆိုက်လေးမှာ register လေးလုပ် ....... domain လေးနဲ့ ကိုယ့်နာမည်ဖြစ်အောင် လင့်လေးချိတ် ပုံစံလေးတွေ ပြောင်းပြီး ၀ဘ်ဆိုဒ်လေးတင် အကျိုးရှိအောင်လုပ်နေဒါမဟုတ်ပါဘူး ....Online မှာတင်မဟုတ်ဘူး Offline မှာပါ တကယ် သေးသေးလေးအနေကနေ အကြီးကြီးဖြစ်လာအောင် တဖက်တလမ်းက တတ်နိင်သလောက် ကြိုးစားနေကြဒါအမှန်ဘဲလေ .....
ပြောမှားဆိုမှားရှိရင် ဗွေမယူပါနဲ့ဗျာ .... မိတ်ပျက်ကုန်ပါအုံးမယ်လေ...
$ƴǩǾ wrote: ကျွန်တော့်အထင် T-Link WebDev ကလည်း နည်းနည်းနွယ်နေမယ်ထင်တယ်။
T-Link WebDev နဲ့ လုံးဝလုံးဝ မပတ်သက်ပါ ...ကျွန်တော်တို့ ၀ဘ်ဆိုဒ်မှာ T-Link နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ တင်ပြထားဒါဘာမှ မရှိပါဘူး ....
$ƴǩǾ wrote: အခုချိန်မှာ သင်တန်းဖွင့်တာက Startup တွေအတွက် အကောင်းဆုံး ၀င်ငွေအမြန်ရမယ့် နည်းလမ်းဘဲ... ဒါပေမယ့် ငွေနောက် မလိုက်ဖို့နဲ့ တကယ် skillful ဖြစ်တဲ့သူတွေက ၊ တကယ် မှန်ကန်တဲ့ ပညာရပ်တွေကို ၊ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ တကယ် တတ်အောင် သင်ပေးလိုက်ကြဖို့ဘဲ တိုက်တွန်းချင်တယ်ဗျာ...
သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်အောင် ငွေကြေးဘယ်လောက်ရင်းရတယ်ဆိုတာ တွက်ကြည့်ဖူးလား ...? အချိန်ဘယ်လောက်ပေးရတယ် ဆိုတာကော နာရီ ပြန်ကြည့်ဖူးလား? အရင် ဆုံးတကယ်ကိုက်မယ်ထင်ရင် လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ ငွေဘယ်လောက်ရင်းနှီးရတယ် အချိန်ဘယ်လောက်ကုန်တယ် ဆိုဒါကို သိလာလိမ့်မယ် ...အကယ်၍ မလုပ်နိုင်သေးရင်၊ မလုပ်ရဲသေးရင်၊ ရင်နှီးမြုပ်နံမှု့ အကုန်မခံနိုင်သေးရင်၊ အချိန်ကိုမခံနိုင်သေးရင်၊ စာရွက်ပေါ်မှာဘဲ အရင်တွက်ချကြည့်ပါ ။ IT Development ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် နဲ့ တွဲ ပြီး ဖွင့်ဒါမို့လို့ ငွေတခုထဲ ကြည့်လိုရတယ်လိုထင်ပါသလား?။
$ƴǩǾ wrote: နောက်တစ်ခုရှိတာက အစ်ကိုတို့ရဲ့ Internet Staff သင်တန်းကြီးတော့ မကြိုက်ဘူးဗျာ. မှန်တာပြောရရင် အဲဒါတစ်ချက်ထဲနဲ့တင် ကျွန်တော် အတော်လေးကို အထင်သေးသွားတာ.. (စိတ်မဆိုးနဲ့နော်)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်လုပ်တတ်တဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါသလဲ .. လိုအပ်တဲ့ ပညာအရေအချင်း အတွေ့အကြုံ အဲဒါတွေမရှိဘဲနဲ့ ဘယ်အလုပ်ရှင် က ကိုယ့်ကို ယုံကြည်စွာနဲ့ အလုပ်ခန့်နိင်မှာလဲ .....အခုကျွန်တော်တို့သင်တယ်ဆိုတာ သင်တန်းကြော်ငြာမှာ ပါဝင်သည့် အချက်များကို ဖတ်ကြည့်ရင် တကယ်လိုအပ်သော အရာများကို သင်ဒါလား? အပေါ်ယံ သင်မှာလားဆိုတာ သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
$ƴǩǾ wrote: ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမြင်သွားတာက အခြား သူလို ကိုယ်လို ပိုက်ဆံရှေ့ထားတဲ့ သင်တန်းလို့ဘဲ မြင်သွားပါတယ်။ (မဝေဖန်ပါဘူးဆိုမှ ပြောမိနေပြန်ပြီ။ စိတ်ဆိုးနဲ့။)
စိတ်မဆိုးပါဘူးဗျာ ..... တကယ်သိသွားအောင် ကျွန်တော်တို့ ပိုက်ဆံကို အဓိက ထားပြီးသင်တာလား တကယ် အတွေအကြုံ နှင့် အလုပ်ရစေရန်သင်ကြားခြင်းလားဆိုတာ ဖောင်ဒါကြီးကိုယ်တိုင် လာရောက် တက်ရောက်ဖို့ အထူးဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ။သိုမှသာ ဖောင်ဒါကြီး အနေနှင့် ကျွန်တော်တို့ သင်တန်းသည် တကယ်သင်ဒါလား? ပိုက်ဆံကို အဓိက ထား၍ သင်ခြင်းလား ဆိုဒါ ဖောင်ဒါကြီးကိုယ်တိုင် ဖောင်ဒါကြီးရဲ့ ဆိုက်မှာ ပြန်လည် ဝေငှ ပေးနိုင်ပါတယ် ။ (ချစ်စနိုးနဲ့ IT Resource ရဲံ့ ဖောင်ဒါကြီး လို့နာမည်တပ်လိုက်ပီနော်)
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီ လို post ကို ဒီမှာ တင်ပြီး ပြန်လည်ဖြေရှင်းတယ်ဆိုဒါကလဲ ဒီက founder ကြီးကိုလေးစားလို့ အချိန်ပေးပြီး ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးနေဒါပါ ။မလိုအပ်တဲ့ စာတွေ ရေးနေရဒါ ဒါပထမဆုံးရေးခြင်းပါဘဲ ....
ကျွန်တော်တောင်တော်တော်အချိန်ကုန်သွားပြီဗျာ ........ ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်ဆိုဒ်ဘယ်ဆိုဒ်ရယ်မဟုတ်ပါဘူး နည်းပညာဆိုဒ်ဆိုတာ ဒီနိုင်ငံနည်းပညာကို တစ်ဖက်တလှမ်းကနေကူညီနေကြတာပဲလေ တကယ်ပြောရရင် ခု
Myanmar IT Development ဆိုတာကြီးကို ကျွန်တော်တည်ထောင်ထားတာမှမဟုတ်တာ Creator Problemclean ကသူ့ Chat Room ကနေကြိုးစားပီး သူတည်ထောင်သွားခဲ့တာလေ ........ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က ကိုယ်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် အနေနဲ့ ကူညီပေးနေယုံလေးပဲရှိပါတယ်ဗျာ............
စာကြွင်း။ ။ ကျွန်တော်ကငယ်သေးတယ်ဗျ (အသက်ထက်ဝါကကြီးနေတာ ) အကိုဆိုတာ လေးစားမှုပေါ်တက်ခေါ်တာပါ အသက်အရပိုင်းခြားခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး အကိုလဲ ကြိုက်သလိုခေါ်လို့ရပါတယ်။
11 Re: Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News] on 7th August 2010, 9:12 pm
ကျေးဇူးဘဲ.... ကျွန်တော်လိုချင်တာ ရသွားပြီ...
12 Re: Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News] on 7th August 2010, 9:18 pm
$ƴǩǾ wrote: ဟိဟိ.
ဘာရသွားတာလဲတော့မသိဘူး ဒါပေမယ့် ၀မ်းသာပါတယ် မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်ပေါ့ ဟီးးးးး
13 Re: Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News] on 8th August 2010, 9:18 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-08-08
ညီလေး $ƴǩǾ လေးစားတယ်ကွာ။စကားခြောက်ခွန်းထဲက၁ခွန်းကိုတော့ ညီလေးပြောတတ်သွားပြီကွ။ဒုတိယအခွန်းဖြစ်တဲ့) ဟုတ်မှန် ၍ အကျိုးရှိပြီး သူများ မနာလိုသော စကား။နောက်တစ်ခုမှာလည်းဟုတ်မှန် ၍ အကျိုးမရှိ သူများလည်းမကြားနာလိုသော စကား၊ကိုမပြောဘဲနေလိုက်တာလည်း ချီးကျူးပါတယ်ကွာ။မိမိက ကောင်းသော အကျိုးရှိသော စကားကို ပြောဆိုနေစေကာမူ နားထောင်သူ တစ်ပါး၏ စရိုက် နှင့် ကိုက်ညီမှ သာ အဲဒီစကားကို အလိုက်သင့် လက်ခံ သဘောကျပေလိမ့်မယ်။ညီလေး။ စကားပြောရာ တိုက်တွန်း ရာ ၌ ကောင်းမွန် သည်ပင် ဖြစ်စေကာမူ နားထောင်သူ အလို အကြိုက်စရိုက် နှင့် မကိုက်ညီပါမူ မကောင်းသော စကားဟု အထင်ခံရတတ်ကြောင်း ဒုက္ကထာသုတ် (အံ-၅-ပါ-၁၅၉)မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ညီလေးက သဒ္ဓါတရား မရှိသူအား သဒ္ဓါတရားနှင့်စပ်သော စကားသည် မကောင်းသော စကား.နဲ့ ပညာမရှိသူအား ပညာနှင့် စပ်သော စကားတွေကို သွားပြောမိတော့ မကောင်းသော စကား .အဖြစ်အထင်ခံရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ငါ့ညီလေးလိုနေတာတွေ ရှိသေးတယ်။ဒီ့ထက်ပိုပြီးရင့်ကျက်အောင်နေသင့်သေးတယ်။
"မလိုအပ်တဲ့ စာတွေ ရေးနေရဒါ ဒါပထမဆုံးရေးခြင်းပါဘဲ"<<ဒီလိုစကားဟာကိုယ်အရင်ကရေးဖူးတာကိုဖော်ပြနေတယ်ဆိုတာဒီကလေးမသိဘဲကိုး။ မင်းတို့ရဲ့နေရာကဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာလည်းအတော်များများသိပါလိမ့်မယ်။"ကျွန်တော်ကငယ်သေးတယ်ဗျ (အသက်ထက်ဝါကကြီးနေတာ)"<<ရေအိုင်ထဲကမထွက်နိုင်သေးဘူးကိုး။သမုဒ္ဒရာကိုမမြင်ဖူးသေးတော့ဒီလိုစကားတွေပြောထွက်နေတာထင်ပါတယ်။ တယ်.. ဒီလူကြီး ကလေးတွေစကားပြောနေတာ ၀င်ပါမိနေပါပြီ။
14 Re: Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News] on 8th August 2010, 3:03 pm
နေကြပါဦးဗျ ဦးတည်ချက်က ကြော်ညာမဟုတ်ဘူးလား<br>အကိုတို့ ဘာတွေ ကျောနေကြတာယဲဟင်<br>
15 Re: Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News] on 9th August 2010, 1:32 pm
yhhtet wrote: "မလိုအပ်တဲ့ စာတွေ ရေးနေရဒါ ဒါပထမဆုံးရေးခြင်းပါဘဲ"<<ဒီလိုစကားဟာကိုယ်အရင်ကရေးဖူးတာကိုဖော်ပြနေတယ်ဆိုတာဒီကလေးမသိဘဲကိုး။
အကိုစိတ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြောပြသွားတဲ့အတွက် လေ့လာမှုတစ်ခုရရှိသွားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကို
16 Re: Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News] on 9th August 2010, 1:35 pm
chan.virus wrote: နေကြပါဦးဗျ ဦးတည်ချက်က ကြော်ညာမဟုတ်ဘူးလား
အကိုတို့ ဘာတွေ ကျောနေကြတာယဲဟင်
ဟုတ်ကဲ့ ဦးတည်ချက်က ကြေငြာခဲ့တာပါ ဒီဆိုဒ်ကဖောင်ဒါကြီးလို ဝေဖန်မှုတွေကိုတော့ တကယ်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ လက်ခံပါတယ် ဒါပေမယ့်ဝေဖန်မှုလဲမဟုတ် တင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာ နဲ့ဘာမှမပတ်သတ်ပဲ ဒီပိုစ့်အောက်မှာ ၀င်ပြောသွားတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကတော့ ဘယ်လိုလဲဆိုတာ မခန့်မှန်းတက်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
17 Re: Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News] on 10th August 2010, 7:01 pm
ဟီဟိ... ကိုဖောင်ဒါကြီး (ရှိုင်းခေါ်သလိုပဲခေါ်တော့မယ် ) ကျနော် ဟိုနေ့ က အကို တင်ထားတဲ့ CM ကြီးကို မြင်လိုက်တယ်နော်... ဘာတဲ့... ပိုက်ဆံ အချီကြီးလိုချင်ရင် သင်တန်းဖွင့် ဆိုလား ဘာဆိုလား... ဟိဟိ... နာသိလိုက်တယ်နော်... ညပိုင်း ကြီးကို... ပြောဖြစ်ပါသေးတယ် Ning အကြောင်း...
ဒီလိုပါပဲ... မြန်မာအိုင်တီလောက ဖွံ့ ဖြိုးမှု Website က တစ်ချို့ ပြောသလို Noobs တွေနဲ့ ဖွဲ့ စည်းထားတာပါ... ပညာလိုချင်ရင် Newbie တွေကို စေတနာ သန့် သန့် နဲ့ပညာမျှဝေချင်ရင် လာခဲ့ပါ... ဘယ်ဆိုက်က ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ကျနော်တို့မပြောပါဘူး... ကျနော်တို့ လဲ Admin ဆိုပေမယ် အဓိက ကတော့ ထိန်းသိမ်းပေးရုံလောက်ပါပဲ... ဟီဟိ အချိန်မရလို့ ဆက်မပြောတော့ဘူး
18 Re: Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News] on 11th August 2010, 4:59 pm
ှုInternet Staff သင်တန်းမှာ Windows Server နဲ့ ပဲသင်မှာလားး
Linux Server Based ကော?
19 Re: Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News] on 12th August 2010, 2:06 pm
ကျတေ်ာ က တော့ ဒီလို ဝေဖန်တာတွေ ကိုကြိုက်တယ်
ဘာပဲ ပြောပြောမသိတဲ့ သိတွေသိသွားမယ် သိတဲ့ သူတွေ လည်း နားလည်သွားမယ်
တခုတော့ ပြောစရာ ရှိတယ်
ဘုရားဟောထားတဲ့ စကားကြီး (၆) ခွန်းကိုတော့ လက်ကိုင်ထားကြပါလို့
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဖိုရမ်မှာ လေးစားစရာ ကောင်းလောက်အောင်တော်တဲ့သူတွေ ရှိတယ်
တချိ်ု့ က အဲလို ဝေဖန်တာ မကျိုက်လို့ ဆက်မရေးတော့တာ ရှိကြတယ် ဘာပဲ ပြောပြော
ဖိုရမ်တိုးတက်မယ် ထင်ရင် ဆုံးရူးံ ရ ၁ ယောက်ပေါ့ နောက်ထပ် လူတော်တွေ ရောက်လာဦးမှာပါ
လူတော် တယောက်ဆုံးရုးံသွားတယ် ဆိုတာ နောက်ထပ် ထွက်ပေါ်လာမယ့် လူသစ်တွေ ထက်
ခုချိန်ထိတော် နေဆဲ့ လူတယောက်ကို ပြောတာပါ အားလုံး ပဲ အဆင်ပြေအောင်
ဖိုရမ်စည်းကမ်းလေးတွေ နဲု့ အညီ ဆောင်ရွက်သွားမယ်
ဆိုရင် အားလုံး အဆင်ပြေကြမှာပါ
20 Re: Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News] on 13th August 2010, 9:07 am
MITR ရေ ကိုယ့်လမ်းကိုလျှောက်ကျရ အောင်လား.......အသက်ကြီးတာတွေ ဝါကြီးတာတွေ
ပြောမနေပါနဲ့တော့....ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘယ်သူမှလဲ ဘာမှဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်ဖြစ်သေးတာ မဟုတ်
ဘူး......ဒါပေမယ့် ကိုရှိုင်းလင်းထွန်း အနေနဲ့ ဒီဖိုရမ်ရဲ့ အသင်းဝင်ဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးကိုသုံးပြီး ကိုယ့်လုပ်
21 Re: Myanmar IT Development Education Center တွင်သင်တန်းဖွင့်လှစ် [Local News]